आफ्नो काम गर्न परमेश्वरले सानाहरुलाई चलाउनुहुन्छ । | eBachan Nepali Christian Magazine
आफ्नो काम गर्न परमेश्वरले सानाहरुलाई चलाउनुहुन्छ ।
मंगलवार १६ जेठ (३० मई) न्यायकर्ता ६ः१–१८
दबोरा र बाराकलाई उठाएर परमेश्वरले इस्राएलीहरुलाई कनानीहरुको अत्याचारबाट मुक्त गर्नुभएको ४० वर्ष पनि बितेको थिएन । त्यस दिन कनानी सीसरा र याबीनलाई खेद्नेहरुमा कति जना अझै जीवितै थिए । तिनीहरुकै मुखबाट परमेश्वरले इस्राएलीहरुलाई दिनुभएको छुटकारा उनीहरुले सुनेका थिए । तर आज उनीहरुले फेरि परमेवरलाई बिर्से । “फरि इस्राएलीहरुले परमप्रभुको दृष्टिमा जुन कुरा खराब थियो त्यही गरे, र उहाँले तिनीहरुलाई मिद्यानीका हातमा सात वर्षसम्म सुम्पिदिनुभयो (पद १) ।” यो “फरि” चौथो पटक दोहोरिएको थियो । यो चौथो पटक पनि इस्राएलीहरुले परमप्रभु परमेश्वरलाई त्यागे र बाल देवताको पूजा गरे र अशेरा देवीलाई पुजे (पद २५) । फलस्वरुप उनीहरुमाथि परमेश्वरको लाठी बज्य्रो ।
जब उनीहरुले फेरि सहायताको निम्ति परमप्रभुलाई पुकारे तब उहाँले गिदोनलाई चुन्नुभयो । गिदोन सबैभन्दा साना थिए (पद १५) । इस्राएलीहरुलाई छुटकारा दिने जिम्मा आफूलाई सुम्पेकोमा उनी छक्क परे । उनले विश्वास नै गर्न सकेनन् । त्यसैले उनले यो कुरा साँच्चै हो कि होइन भनी निक्र्यौल गर्न भाहे । तर उनीद्धारा नै इस्राएलमा मुक्ति ल्याउने परमेश्वरले
इच्छा गर्नुभयो । आज हामीमध्ये साना र कमजोरहरुद्धारा नै यस देशमा मुक्ति ल्याउने परमेश्वरको इच्छा छ किनकि हाम्रो दुर्बलतामा नै परमेश्वरको शक्तिको काम हुन्छ (२ कोरिन्थी १२ः९) । परमेश्वरको नै शक्तिमा मुक्तिको काम गर्न के हामी तयार छौं ?
प्रार्थनाः परमेश्वर बुवा, तपाई मेरा कमजोरीहरु जान्नुहुन्छ । तपाईको काम गर्न मलाई तपाईको शक्तिले भर्नुहोस् ।
Previous: विजयको खुसी इस्राएललाई विजय दिने परमेश्वर नै हुनुहुन्थ्यो ।
Next: मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अध्यक्षमा पा. तारा सिहं गुरुङ